အခြေခံအကျဆုံးစာအုပ် | မေတ္တာရိပ်
← သက်ရှည်ကျန်းမာ လေးဂါထာ
ဆရာတော် ဦးဇ၀န၏ အွန်လိုင်း မေးဖြေများ →
အခြေခံအကျဆုံးစာအုပ်	Posted on July 10, 2009	by mettayate အရှင်ဇ၀န မေတ္တာရှင် ညွှန်ကြားတော်မှုသော စာအုပ်များ –
တရားစာပေတွေ ဖတ်ရှုလေ့လာသူတွေအတွက် အရင်ဦးဆုံးဖတ်သင့်တဲ့ အခြေခံအကျဆုံးစာအုပ်
ဓမ္မာစရိယ ဦးမောင်မောင်လေး ဘာသာပြန်ထားတဲ့-
(၁) အနှစ်ချုပ် သံယုတ္တနိကာယ်၊
(၂) အနှစ်ချုပ် အင်္ဂုတ္တရ နိကာယ်၊
(၃) အနှစ်ချုပ် ဒီဃနိကာယ်၊
(၄) အနှစ်ချုပ် မဇ္ဈိမနိကာယ်
စတဲ့ စာအုပ်(၄)အုပ်ကို အရင်ဦးဆုံး ဖတ်သင့်ကြောင်း လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မှတ်ချက်။ ဆရာတော် ညွှန်ကြားထားတဲ့စာအုပ်များကို အွန်လိုင်းမှာ ရှာလို့မတွေ့သေးပါဘူးရှင်။ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတို့မှာ ထိုစာအုပ်များရှိပါက ဓမ္မအလှူဖြင့် မျှဝေပေးစေလိုပါတယ်။
This entry was posted in ဓမ္မ စာအုပ်များ and tagged ဓမ္မ. Bookmark the permalink.	← သက်ရှည်ကျန်းမာ လေးဂါထာ
One Response to အခြေခံအကျဆုံးစာအုပ်
Fred K Thet says:	August 14, 2012 at 7:23 am	လာလည်သွားပါတယ် ကျမဘလော့လေးကိုလည်း လာလည်ပါ။www.dhamatharlar.blogspot.com